Umatshini wokucoca irayisi uyathengiswa,umthengisi womatshini wokucoca i-paddy irayisi
1.Zilungele izixhobo ezingaxutywanga ezifana ne-paddy irayisi, ingqolowa, umbona kunye nembotyi njl
2.Umatshini wokucoca umatshini wokucoca ilayisi onesakhiwo esizinzileyo, akukho litye liyabandakanyeka kwingqolowa
3.Ubume beCompact kunye namandla oomatshini abanokuthenjwa
4.Ukusetyenziswa kwamandla kancinci kunye nokuveliswa okukhulu
Iinkcukacha zeMveliso yomatshini wokucoca iPaddy
Ngaphambi kokuba i-paddy ihambe umatshini wokugaya irayisi,umlimi okanye umzi-mveliso wokulungisa irayisi kufuneka ucoce i-paddy ukuze ususe izinto ezingafunekiyo. Ukucocwa kwerayisi yePaddy kuya kuphucula ukomisa nokuqina kwetyala., Ukunciphisa ukwaphuka ngexesha lokugaya kunye nokuphucula ukuphuma kwemigangatho kunye nomgangatho.nokubakho ngeendlela ezimbini zokucoca i-paddy: ukuwina kunye nescreen.
Ukwahlula kungaphula izinto ezilula ezinje ngengca engafakwanga, umququ, Ukhula lwembewu kunye nengca.kodwa ukusika kuphela kungasusa ukungacoceki. Amanye amasuntswana anzima njengembewu enzima yokhula, iindidi ezingekho, amatye kunye nobumdaka busenokubandakanywa kwirayisi.Ukucola kungathatha izinto ezincinci nezinzima ezifana nembewu yokhula, amasuntswana omhlaba kunye namatye ngentsizi.kodwa ayilunganga ekungcoleni okukhulu njengengca, umququ, kunye neenkozo ezingafakwanga.
UVictor brand 5X-50 umatshini wokucoca i-paddy irayisi ecocekileyo udibanise iimfuno zokwenza umsebenzi, ukwahlula ukwahlulahlula. Lo matshini wokucoca i-paddy usetyenziselwa ukucoca i-paddy,ingqolowa, isoya,umbona,umbona,amantongomane ekusebenzeni kokutya okuziinkozo.umatshini wokucoca irayisi awubeki nje isixhobo sokucoca i-vibration, umatshini wokuwina kunye, injineli iqinisekisa ukuba izixhobo zisebenza kula macandelo mabini ahlukeneyo. paddy umatshini wokuchaphazela irayisi ususa amatye, udaka kunye nokunye ukungcola okunzima okuvela ezinkozweni okusekwe kumandla adakumbileyo ahlukileyo ,esiphakathi kwengqolowa kunye nokungahlambuluki okunzima. Umatshini wokucoca umatshini wokucoca ilayisi ngumatshini ofanelekileyo wokususa amatye anobukhulu obufanayo kunye nobume beengqolowa.
Iimpawu zomatshini wokucoca i-paddy irayisi
1.Lo matshini wokucoca irayisi uhambelana nesisundu esomeleleyo, ilungele ngakumbi ingqolowa enamatye amaninzi,ilitye eliphezulu lokususa ilitye.
2.I-sieves eyahlukeneyo eqhutywa zii-motors ezimbini ezijikelezayo, ilungele ukucoca ukungcola okukhulu nezincinci.
3.Nge fan yangaphandle,ukwakhiwa okutywinwe kakuhle, akukho kuvuza uthuli, uthuli kunye nokungcola kokukhanya kungasuswa yinkqubo yokufakwa komoya.
4.Umatshini wokucoca umdiliya wepaddy wamkela ukuzilungelelanisa nemveliso yokuthintela isixhobo esisebenzayo ukuze kwenziwe isixhobo somatshini.
5.Umatshini wokucoca umdiliya wepaddy wamkela indlela yokubuyisa kunye nokuthwala irabha, encinci encinci, ingxolo ephantsi.
Iiparamitha zomatshini wokucoca i-paddy irayisi
Umzekelo VT5X50 VT5X85 VT5X100 VT5X125
(itoni / h)
Umgangatho wokucoca Engaphezulu kwe 98% Engaphezulu kwe 98% Engaphezulu kwe 98% Engaphezulu kwe 98%
Nxibelelana nathi ngomatshini wokucoca iPaddy